२० बैशाख २०७६, शुक्रबार १५:२१ मा
काठमाडौं : हरेक फेब्रुअरी १४ मा युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ त ? कसरी यो चर्चित भयो ? प्रेम वा अनुभुतिको त्याग र वलिदानबाट सुरु भएको यो ऐतिहासिक घटना अचेल त चाड जस्तै बनेको छ ।
–पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकका आधारमा ७३ प्रतिशत भन्दा बढी पुरुष यस दिनमा फूल खरिद गर्छन् । यस्तै र २७ प्रतिशत महिला हुन्छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण, एकैदिन कोरोनाले ५४ जनाको मृत्यु
सल्यानमा बिहीबार थप १ सय १२ जनामा कोरोना पुष्टि, थप एकजनाको मृत्यु
सल्यानमा कोरोनाबाट थप दुई जनाको मृत्यु
पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र चिर्न फ्लोर क्रस : प्रकाश ज्वाला
सल्यानका कोरोना संक्रमितको काठमाण्डौमा मृत्यु
सल्यानमा सोलारको व्याट्री पड्किँदा दुई घर जलेर नष्ट